Ny Kor'any na Koràna dia ilay boky masin’ny Silamo. Ho an’ireo mpino miozolmana dia teny ara-bakitenin’ilay Andriamanitra tokana (Allah) ny Kor'any. Amin'ny teny arabo dia القُرْآن / al-Qur’ân no anaran'ilay boky. Ho an’ny Miozolmana dia fanangonana ny tenin’Andriamanitra izay fanambaràna (āyāt) nomeny ny mpaminany farany sady irak’Andriamanitra, dia i Mohamady (محمد / Muḥammad) nanomboka tamin’ny taona 610-612 hatramin’ny fotoana nahafatesany tamin’ny taona 632 tamin’ny alalan’ny anjely Gabriela (جبريل /Jibrîl).
1.1 Famaritana azy
1.2 Tsy niharam-panovana
1.3 Boky tsy manavaka ny olona hiantefany
2 Ny tantara mahakasika ny fahatongavan'ny Kor'any
2.1 Tamin'ny nahaterahan'ny Mpaminany Mohamady
2.2 Ny fahatongavan'ny Kor'any
2.3 Ny nianarana sy ny nanoratana ireo faminanianany
2.4 Ny fandraisan'ny Arabo ny faminaniana tamin'izay
2.4.1 Fahatongavan'ny fanambaràna
3.1 Ny fifindra-monina tany Al-Habasha
3.2 Ny nahafatesan'ny Mpaminany Mohamady
4 Ny Soràta ao amin'ny Kor'any
6 Jereo :
7.1 Kor'any amin'ny teny farantsay (Wikisource):
7.2 Kor'any amin'ny teny anglisy (Wikisource):
7.3 Kor'any amin'ny teny malagasy
Ny anarana hoe Kor’any (القرآن‎‎) dia midika hoe: "ilay fivakiana (matetika)". Ny Kor'any dia boky fototra manazava ny finoana Silamo, izay voasoratra amin’ny fiteny arabo, tenindrazan’ilay mpaminany nitondra azy. Ny Kor'any amin’ny fieny arabo hatramin’izao no eken'ny mpino silamo ho boky masina.
Araka ny fampianaran'ny Silamo, ny Kor'any dia mbola tsy niharan'ny fanovana. Na ny fomba famakiana azy na ny fomba fanazavana azy na ny fomba fampiharana azy dia mbola hita mazava tsara ary voatahiry avy amin’ny alalan’ny boky mirakitra ny tenin’ilay mpaminany nitondra azy, izay atao hoe Hadith Sahih. Ny Kor’any dia manana fomba famakiana azy miisa fito. Vakina amin’ny feo manaitra sy lalim-paka mba haharesy lahatra sahady na dia tsy fantatra aza ny zavatra teneniny. Voasariky ny feo miditra sy mamakivaky ny fanahy ny mpihaino ka mirotsaka amin'ny fomba mahagaga ny ranomasony. Amin'ny Silamo, ny Kor’any dia boky manan-kaja tsy misy toa azy. Ahitana ny lafin’ny fiainana rehetra ny ao anatiny: na ara-piarahamonina, na ara-pivavahana, na ara-pitondrana, na ara-piarovana izany, dia voalahadahatra ao anatiny.
Boky tsy manavaka ny olona hiantefanyHanova
Ny Kor’any dia boky tsy namela ny sarangan’olona rehetra. Na mpanan-karena na mahantra na fadiranovana na mpino silamo na mpino kristianina na mpino jiosy na tsy mpino an’Andriamanitra mihitsy dia mbola namelany hafatra sy anatra ary fampitandremana. Angamba ianao ho tontohitra. Ny Kor’any dia boky manambara ny zavatra ho avy sy efa lasa. Boky izay manambara ny zavatra hiseho ao anatin’ny fasana sy ny zavatra hiseho amin’ny andron’ny fitsarana. Ny Kor’any dia boky manambarana ny tsiambaratelon’izao tontolo izao. Na ny fiandohany izany na ny fiafarany izany na ny fizotrany ankehitriny izany dia, tsy misy na dia iray aza nafeniny.
Ny tantara mahakasika ny fahatongavan'ny Kor'anyHanova
Tamin'ny nahaterahan'ny Mpaminany MohamadyHanova
Taona 570 taor. J.K.: Teraka ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy).
Raha jerena ny toe-draharaha tamin’ny taona 570 dia nanjaka ireo Romana (Kristianina katolika) tao Eoropa sy faritra Moyen-Orient (Siria, Palestina, Iràka,….) Ny mpanjaka Clovis I tamin’ny taona 496 dia nanaraka ny finoana kristianina, ka isan’ireo niandohan’ny Eoropa kristianina voalohany. Izany hoe nanjaka tanteraka ny finoana kristianina tao Eoropa tamin’izany fotoana izany ary betsaka ny ady niseho nataon’ireo Kristianina katolika. Ary nanomboka tamin’ny taona 325 dia tsy nitsahatra ny fanenjehana ireo mpino maro samihafa ary tao anatin’ny haizina tanteraka izao tontolo izao tamin’io fotoana io. Tamin’izany ireo Amerika roa dia mbola tsy hitan'ny Eoropeana raha tsy tamin’ny 1492 ary tsy nitsahatra namono ireo Indianina nonina tao izy ireo ka tamin’ny faran'ny 1776 dia nahazo fahaleovan-tena. Tamin’ny taona 570 dia teraka ny Mpaminany Mohamady (fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy) tao Maka ao Arabia.
Ny fahatongavan'ny Kor'anyHanova
Taona 610 taor. J.K.: Tonga tamin’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy) ny Wahi (Fanambaràna na Faminaniana) izay vaovao mahafaly ho an’ny olombelona rehetra sy fampitandremana azy ireo amin’ny sazy mamaivay miandry azy ireo raha toa ka mitsipaka izany. Tonga ny Kor’any masina. Tonga tamin’ny Mpaminany Mohamady (fandriampahalemana sy ny fitahian’ Ilay Nahary anie ho azy), ny Wahi (fanambarana avy amin’Ilay Avo Tsy Toha) ny Kor’any manan-kaja. Niantso ny vahoakany izy mba hanaraka ny finoana silamo ary tsy nitsahatra nitombo ireo vahoaka nanaraka azy. Nefa, nahatezitra an’ireo Moushrikoun (mpanompo sampy) izany ka nandeha ny famoretana maro samihafa.
Voalohany, i Jibrily (Anjely Gabriela) no nitondra ny Kor’any masina tamin’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy) ary nampianatra azy ny fomba famakiana azy, ny fomba fandaharana azy, ny fomba fitehirizana azy ao an-tsaina sy ny fomba fanazavana azy.
Ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy) dia nampianatra ny Kor’any tamin’ireo Sahaba (mpiaradia taminy) izay miisa mihoatra ny 10 000. Nampianariny azy ireo ny fomba famakiana ny Kor'any, ny fomba fandaharana azy, ny fomba fitehirizana azy ao an-tsaina sy ny fomba fanazavana azy. Ohatra amin’ireo Sahaba nahay tsianjery ny Kor’any iray manontolo dia i `Abd Allah ibn Mas`ud, i Mu`adh ibn Jabal, i Hudhayfa ibn al-Yaman, i Ubay ibn Ka`b, i Zayd ibn Thabit,……miisa zato mahery.
Manaraka izany, nasain’ny Mpaminany (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy) nosoratana koa ny boky masina Kor’any. Ireo Sahaba (mpiaradia taminy) izay malaza tamin’ny fanoratana ny boky masina Kor’any dia : i Abou Bakr, i ‘Omar ibn al khattab, i ‘Outhman, i Ali ibn abi talib, i Ubay ibn Ka`b, i Mu`adh ibn Jabal, i Zayd ibn Thabit, i Abu Zayd, i Mou’awiya, i Sayid ibn al-Walid sy maro hafa…..
Ny fandraisan'ny Arabo ny faminaniana tamin'izayHanova
Hoy i Waraqah Ibn Nawfal tamin’ny mpaminany Mohamady (Salallah anlayhi wa salam). Ny fomba nandraisan’ireo vahoakan'i Maka ny fiantsoana izay nentiny tamin'izy ireo. Nanana faniriana i Waraqah ibn Nawfal ny mba ho velona amin’izany fotoana izany. Nefa, tsy mba velona izy tamin’izany fa efa maty. Rehefa avy eo dia, nanomboka ny iraka izay nampanirahina azy ny Mpaminany Mohamady (Salallah anlayhi wa salam). Maro ireo nankahala azy sy nanendrikendrika azy. Tao ny nilaza hoe: ny mpaminany Mohamady (Salallah anlayhi wa salam) dia mpamorika na mpamosavy, tao ny niteny fa izy dia mpandainga, tao koa no nilaza fa izy dia poety, tao no nilaza fa izy dia novorehin’olona, tao koa no nilaza fa izy dia mpandangolango resaka ihany. Tao koa ny nilaza fa izy dia mihambo ho mpaminany ihany sns. Nefa, teo aloha dia tena niaky daholo izy ireo tamin’ny fahamarinany sy ny hatsaran’ny fitondran-tenany. Tao ny nampanantena azy ny ho filoha, tao koa ny nampanantena azy vehivavy tsara tarehy, tao ny nampanantena azy vola tsy toko tsy forohina nefa tsy mba nanaiky izy na dia iray aza amin’ireo tolo-kevitr’ireo mpiara-belona taminy ireo. Dia nanao tetikady izy ireo ny mba hamonoana azy sy handroahana azy hiala eo amin’ny tanàna.
Ny fifindra-monina tany Al-HabashaHanova
Ny fifindra monina tao Al-Habasha (Abisinia ao Etiopia, Afrika).
Ny fifindramonina voalohany, taona faha dimy (5) ny fahatongavan’ny faminaniana (taona 615).
Rehefa nandeha ny fampijaliana natao tamin’ireo mpino silamo vaovao dia nomen’ny Mpaminany (Salallah anlayhi wa salam) alalana ireo andian’ny mpino silamo vitsivitsy, dimy amby ny folo (15) hialokaloka any Al-Habasha (Etiopia) amin’ny fanjakan’i Aṣḥama ibn Abjar (mpanjaka kristianina Armaha II), ireto avy izy ireo:
Ny nahafatesan'ny Mpaminany MohamadyHanova
Taona 632: Maty ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay nahary anie ho azy) ary namela ny boky masina Kor’any an-tsoratra sy tao am-pon’ireo mpiara-dia taminy miisa 124 000 mihoatra. Rehefa mivavaka ireo Sahaba (mpiaradia taminy) dia nampianarin’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’I Ilay nahary anie ho azy) namaky ny ampahany ao amin’ny boky masina Kor’any. Tsy maintsy mamaky tapany amin’ny soratra hita ao amin’ny boky masina Kor’any ireo Sahaba sy ny mpino silamo rehetra mandraka ankehitriny.
Taona 610: Tonga tamin’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay nahary anie ho azy) ny Wahi (Fanambaràna na Faminaniana) vaovao mahafaly ho an’ny olombelona rehetra sy fampitandremana azy ireo amin’ny sazy mamaivay miandry azy ireo raha toa ka mitsipak’izany izy ireo. Tonga ny Kor’any masina.
Taona 632: Maty ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay nahary anie ho azy) ary namela ny boky masina Kor’any antsoratra sy am-pon’ireo mpiaradia taminy miisa mihoatra ny 124 000. Rehefa mivavka ireo Sahaba (mpiaradia) dia, nampianarin’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian' Ilay Nahary anie ho azy) namaky ny ampahany ao amin’ny boky masina Kor’any. Tsy maintsy mamaky tapany amin’ny soratra hita ao amin’ny boky masina Kor’any ireo Sahaba sy ny mpino silamo rehetra mandrak’ankehitriny.
Taona 634: Natambatra ho boky iray ireo takelaka rehetra nosoratana nandritran’ny fahaveloman’ny Mpaminany Mohamady (Fandriampahalemana sy fitahian’Ilay Nahary anie ho azy). Navory daholo ireo Sahaba ary nomena an’i Zayd ibn Thabit (Allah anie ho faly aminy) ny hitantana ny vondron’ireo Sahaba hanao izany.
I Zayd ibn Thabit (Allah anie ho faly aminy) dia, Sahaba anisan'ny nosafidin’ny mpaminany manokana ho mpanoratra ny Kor’any noho ny fahaizany mamaky, manao tsianjery, manoratra ary mitadidy zavatra. Ary mbola i Zayd koa no nasain’i Abou bakr (Radhiyallah 'anho) Khalifa (mpitondra voalohany taorian’ny mpaminany) hanangona ireo takelaka ary hanao izany ho boky mitambatra iray. Nanaiky i Zayd miaraka amin’ireo Sahaba hafa izay samy mpanoratra ary mpahay tsianjery ny boky masina Kor’any nandritra ny fahaveloman’ny mpaminany.
Taona 650: Nandritra ny fitondran’i ‘Outhman (Radhiyallah 'anho), Khalifa fahatelo, dia nasain'ity farany i Zayd ibn Thabit mba hanao kopia maromaro ny Kor’any ary hanaparitaka izany amin’ny toerana maro satria efa tsy nitsahatra niparitaka ny finoana silamo. Ohatra: Nalefa tany Sham (Faritra Siria), Iràka, Maka, Madìna, sns.
Ny Soràta ao amin'ny Kor'anyHanova
Amin’Ilay lalan’ireo izay nofenoinao ny fahasoavanao.
Fa tsy amin’ireo izay niharan’ny fahatezeranao (Jiosy) na amin’ireo izay ao anatin’ny fahaverezana (Kristianina).
Ity Sorata Al fatiha ity dia manome toromarika ny olombelona izay hamaky azy na handinika azy ny mba hanala ny hevitra rehetra izay efa nisy tao aminy mahakasika ny zava-drehetra ary tsy mikatsaka izy afa tsy ny fahamarinana irery ihany. Ary ny mba hangataka amin’i Allah mba ho tantanany mandritra ny famakiany sy fandinihany an’ity soràta ity na ny boky manan-kaja Kor’any iray manontolo. Ary voasoratra mazava tsara amin’ny voalohany fa ny fiderana an’Ilay Nahary no voalohany hita ao amin’ity soràta manam-boninahitra ity. Ary aoka mba ho haintsika fa ny boky manan-kaja Kor’any iray manontolo no valin’ny hataka izay hitanao amin’ity sorata manan-boninahitra be ity.
Ireo Ayaat (andininy) hita ao anaty boky manan-kaja Kor'any:
'Raha mba nampidininay tamin’ny tendrombohitra ity boky manan-kaja Kor’any ity, mba nahitanao fa niambany tanteraka ary vakivaky izy noho ny fahatahorany an’i Allah. Ary izany fanoharana izany dia tantarainay amin’ny zanak’olombelona mba hahafahan’izy ireo handinika tsara ny zavatra tokony hataon'izy ireo'.
Ny boky manan-kaja Kor’any soràta al Hashr 59 ayat 21.
Ny filazana Tawhid ao anaty boky manan-kaja Kor'any:
Ny boky manan-kaja Kor’any sorata [Muhammad 47 ayat 19].
Ny fiantsoana amin'ny lala-mahitsy.
Ny boky manan-kaja Kor’any Soràta Al An’am 6 ayat 153.
Ny filazana zavatra ho avy:
‘Amin’ny tena marina, (ny zavatra izay nampanantenaina anareo) dia, tsy maintsy higadona’
Ny boky manan-kaja Kor’any Soràta Al Moursalat 77 ayat 7.
Inona ny zavatra izay nampanantenaina atsika?
Betsaka ireo zavatra ireo, ny tena lehibe dia, tanisaintsika:
- ny fahafatesana tsy maintsy ho tonga;
- ny masoandro ho potipotika ka tsy hisy intsony ny hazavana eto an-tany;
- ny Tany dia ho rava miaraka amin’ny tendrombohitra;
- ny andro farany tsy maintsy ho tonga;
- ny andro fitsarana;
- ny Paradisa;
- ny afo be;
- ny fidirana ao amin’ny Paradisa;
- ny fidirana ao amin’ny afo be;
- ny famaizana ao amin’ny afo be;
- ny hasoavana ao amin’ny paradisa.
Lazao hoe: ‘Izaho dia mitady fiarovana avy amin’ny Tompon’ny olombelona.
Ilay mpanjakan’ny olombelona.
Hanohitra ny haratsian’ny mpaka fanahy mamerivery ny saina.
Izay maka fanahy (mampisy wasiwasy) ny fon’ny olombelona.
Na avy amin’ny Jiny (Angatra/Matoatoa) izany na avy amin’ny olombelona amin’izy ireny.
Ny jiny dia anisan’ny zavaboaharin’ilay Nahary izay nohariany ary mahita antsika fa saingy isika kosa tsy afaka mahita azy ireo, raha tsy hoe angaha izy mihitsy no te hiseho amin’ny olombelona. Tahaka antsika olombelona dia misy ny mpino ny Tompo Allah amin’izy ireo ary misy koa ireo tsy mpino an’ny Tompo Allah. Marihina fa izy ireo koa dia isan’ny iantefan’ny faminaniana.
Lazao hoe: ‘Izaho dia, mitady fiarovana avy amin’ny Tompon’ny maraina vao mangiran-dratsy,
Hanohitra ny ratsy izay avy amin’ny zava-boahariny,
Hanohitra ny haratsiana entin’ny alina rehefa mikotroka iny izy,
Hanohitra ny haratsiana’ireo mpamosavy mpitsoka amin’ny vona,
Hanohitra ny haratsiana’ny mpialona rehefa feno fialonanan izy.
Allah Ilay mahefa sy tsy miankindoha amin’ny hafa ary maharitra mandrakizay.
Ho levona anie ny tanan-droan’i Abi-Lahab sy ny tenany!
Ho eny am-bozonany ny tady mafy vita amin’ny kofehy madinika manify.
Tafsir – Famelabelarana sy fanazavana.
Abi Lahab dia, midika ho rain’ny afo. Izany dia, fiantsoana an’i ‘Abdoul ‘Ouzzaa, iray amin’ireo zanak’i ‘Aboul Mouttalib. Tsy voalaza amin’ny anarany manokana izy ao anatin’ny boky manan-kaja Kor’any satria, mety noho ny anarany izay mampiseho fanompoan-tsampy. Ity lehilahy ity dia fahavalon’ny Mpaminany Mohamady (salallah ‘anlayhi wa salam) ary fatra-pitsikera ny finoana silamo. Rehefa ny Mpaminany (Salallah ‘anlayhi wa salam) miantso ny olona mba hiditra amin’ny finoana silamo dia tsy maintsy sakanan’i Abu Lahab foana izy ary ankaratsiny sy ankavadesany.
Rehefa tonga ny famonjen’i Allah sy ny fandresena.
Ary hahita andian’olona maro hanaraka ny finoana an’i Allah ianao.
Amin’ny Anaran’i Allah Ilay Be Fiantra Sy Be Indra Fo.
koa mivavaha amin’ny Tomponao ary manolora sorona ho Azy,
koa loza ho an’ireo mpivavaka
izay manao an-tsirambina ny fivavahan’izy ireo;
Nohon’ny amin’ny fifanarahan’ireo koreisita.
Ilay fifanarahan’izy ireo amin’ny fandehanana mandritra ny ririnina sy amin’ny fahavaratra
dia aoka hanompo ny Tompon’ity trano fanompoana masina ity izy ireo,
Moa ve tsy fantatrao nanao ahoana no nanaovan’ny Tomponao ireo olon’ny elefanta?
Moa ve tsy nataony nanjavona ny teti-dratsin’izy ireo?
Izay nitora-bato tanimanga voadotra tamin’ny afo be tamin’izy ireo.
Ny boky manan-kaja Kor’any Sorata Al Fily – Ny Elefanta – 105
Loza ho an’izay mpanendrikendrika sy mpifosa!
Izany dia, afon’I Allah miredareda!
Ny boky manan-kaja Kor’any sorata Al Homaza – Ny mpanendrikendrika 104.
Mianiana aho amin’ny fotoana.
Fa tena marina, ny olombeona dia, ao anatin’ny fahaverezana.
Afa tsy ireo izay nino sy nanao ny asa soa ary nifananatra tamin’ny fahamarinana, sy nifananatra ihany koa tamim-paharetana.
Tafsir - Ny fanazavana an’ity sorata ity.
Tatitra azo avy tamin’ ny Sahaba iray ‘Oubaidoullah ibn Hisn radhiyallah ‘anhou, rehefa mifanena ny mpiaradia tamin’ny Mpaminany (Salallah ‘anlayhi wa salam) anakiroa dia tsy mba mifandao izy ireo afa tsy aorian’ny famakiandreo an’ity sorata ity (sourate al ‘ansr).
Tsiahy: At Tabarani.
Niteny ny Imam Shafi’I ahimahoullah, manao hoe: "Raha toa ka tena eritreretin’olona tsara ny momba an’ity sorata ity dia, efa ampy an’izy ireo izany hitari-dalana amin’ny fahamarinana".
Variana amin’ny fanangonan-karena tokoa ianareo,
Ka amin’izay fotoana izay dia tsy maintsy hanontaniana ny amin’ireo harena marobe ianareo.
Ka ho an’izay mavesa-danja kosa ny asa soa vitany
dia ho ao anatin’ny fiainam-pahasambarana feno fankasitrahana izy.
Fa ho an’izay maivan-danja kosa ny asa soa vitany dia, ny lavaka mangitsokitsokin’ny afo be no ho fonenany.
Moa ve tonga taminao ny tantaran’ny Ghashiya (Anaran’ny Andro farany)
Hisy endrika (endrik’olona) amin’izay fotoana izay ho ao anatin’ny fahatahorana (tanteraka).
Hampisotroina avy amin’ny loharano mangotraka.
Hisy koa ireo endrika amin’izay fotoana izay ho ao anatin’ny fiadanana.
Afapo tokoa amin’ny fiezahana nataon’izy ireo
Ka tsy haheno ao anatin’izany, ireo teny maloto (tsy mendrika).
Hita ao anatin’izany koa ny loharano mikoriana.
Ireo fitaovampisotroana eo ampelatanan’izy ireo.
Moa tsy nodinihin’izy ireo va ny rameva, ahoana ny fomba nohariana azy?
Satria, i Allah dia hanasazy amin’ny famaizana mafy tokoa.
Tena marina! Any amiko no hiverenan’izy ireo indray.
Ny boky manan-kaja Kor’any Sorata Al Ghashiyya – ‘Ilay manarona’ – 88
Amin’ny anaran’i Allah Ilay be fiantra sy be indrafo.
Mianiana aho amin’ny lanitra feno ireo antokon-kintana
sy amin’ilay andro nampanantenaina
sy amin’ny manatry maso izany, ary mijoro ho vavolom-belona.
voaozona ireo olon’ny Oukhdoud (Hantsana lalina)
vavolom-belona koa izy ireo ny amin’ny fampijaliana izay nataon’izy ireo ny mpino.
Azy ny fanjakan’ny lanitra sy ny tany; Allah Ilay vavolom-belona amin’ny zavadrehetra.
Tena marina fa ireo izay nampijaly ny mpino fa tsy nibebaka tamin’izany dia, hahazo ny famaizana ao amin’ny afo be ary ho dorana.
Moa ve tonga tany aminao ny tantaran’ireo mpiantafika?
Voarakitra an-takelaka eo anatrehan’i Allah.
Ny Oniversiten'i Birmingham, izany hoe ny Cadbury Research Library, dia nanao fizahana amin’ny lafiny ara-daty ny takelaka tranainy izay nisy tao anatin’ny tranombokiny tamin’ny taona 2015.
Rehefa nandeha ny fanaovana ny fitiliana ilay takelaka anakiroa mahakasika ny boky manan-kaja Kor’any dia, hita araka ny kajikajy avo lenta fa ireo takelaka anakiroa ireo dia nisoratana teo anelanelan’ny taona 568 sy 645.
Tsara marihina fa ireto takelaka ireto dia nosoratana amin’ny fomba fanoratra Hidjazi zany hoe mbola ilay fomba fanoratana tamin’ny voalohany mihitsy.
Ny ayaat izay hitanao amin’ireto takelaka ireto dia, ao amin’ny Sorata Al Khahf 18 ayaat 17–31, Sorata Mariyam 19 ayaat 91–98 ary Sorata Twaha 20 ayaat 1-40.
Natao hitan’ny rehetra ireto takelaka ireto nanomboka tamin’ny volana Oktobra 2015 ka hatramin’ny volana Aogositra 2016 izao. Ao amin’ny Birmingham Museum and Art Gallery ho an’izay te ahafantatra be be ko koa.
Andriamatoa Alba Fedeli, tamin’izy nanomana ny fikarohany sy ny diplôme Ph.D nazy dia, nahatsikaritra ireo takelaka ireo ary nangataka ny mba hanaovana ny fitiliana azy amin’ny Kabônina-14. Ary notontosaina izany tao tamin’ny University of Oxford's Radiocarbon Accelerator Unit.
Raha ny resaka original no resahina amin’ny boky manan-kaja Kor’any dia tena Original tokoa ny boky manan-kaja Kor’any. Ao ny feo izay mampita amin'ny taranaka mifandimby hatramintsika ankehitriny. Ary tsy tapaka amin’ny famerenana izany mandritra ny soalat sy taraweeh isaka ny volana Ramadany ireny. Ny soratra dia mbola amin’ny teny arabo izay fitenin-drazan’ny Mpaminany Mohamady (Salallah ‘anlayhi wa salam). Ny fitenin'ny boky manan-kaja Kor’any dia tena fampiasan'ny Arabo mandraka ankehitriny fa tsy mba fiteny maty velively izay tsy hain’ny olona afa tsy olom-bitsy. Ao koa ny boky izay mbola dian-tanan’ireo voalohany izay nanoratra azy izay hitantsika ankehitriny amin’io sary io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kor%27any&oldid=994982"
Dernière modification le 25 Jolay 2020, à 07:16
Voaova farany tamin'ny 25 Jolay 2020 amin'ny 07:16 ity pejy ity.